कारीश्मा मानन्धर अनी बिनोद मानन्धर बिच चुनाबको तनाब - SK Media
Buying & Selling Product
Home / News / कारीश्मा मानन्धर अनी बिनोद मानन्धर बिच चुनाबको तनाब
कारीश्मा मानन्धर अनी बिनोद मानन्धर बिच चुनाबको तनाब
skmedia May 21, 2017 News
म आजकी नारी हुँ, दबाउने कोसिस नगरे हुन्छ
आइतबार साँझ सात बजे अभिनेत्री करिश्मा मानन्धरले फेसबुकमा लेखेको स्टाटस हो यो । यो स्टाटसले हालसम्म झन्डै १४ सय लाइक तथा १ सयभन्दा बढी प्रतिक्रिया पाएको छ । करिश्माको यो स्टाटस उनकै श्रीमान् विनोद मानन्धरप्रति लक्षित छ भन्ने कुरा जो–कोहीले बुझेका छन् । किनभने आइतबार बिहान उनले फेसबुकमा लेखेको एउटा लामो स्टाटसले सामाजिक सञ्जालमा तहल्का मच्चाइसकेको थियो । उक्त स्टाटसमा करिश्माले श्रीमान् विनोद मानन्धरलाई गालीकै शैलीमा आफूलाई मताधिकारबाट वञ्चित गराएको आरोप लगाएकी थिइन् । श्रीमान्प्रति रिस पोख्ने उक्त स्टाटस लेखेको केही घण्टापछि करिश्माले माथि उल्लेखित स्टाटस लेखेर आफ्नै श्रीमान्लाई लक्षित गर्दै धम्कीको भाषा प्रयोग गरेकी हुन् ।
( यस्तो छ चुरो कुरो )
वैशाख ३१ गते आइतबार पहिलो चरणको स्थानीय निकायको निर्वाचनको दिन बिहान करिब १० बजे करिश्मा मानन्धरले नेपाली तथा अंग्रेजी भाषामा एउटा स्टाटस लेखिन् । उक्त स्टाटस करिश्माका श्रीमान् विनोद मानन्धरले मतदानका लागि आवश्यक मतदाता परिचयपत्र नबनाइदिएको विषयमा केन्द्रित थियो । उक्त स्टाटसमार्फत करिश्माले आफू र आफ्ना श्रीमान्बीचको घरायसी विवादलाई सतहमा ल्याउने काम गरेकी छिन् । अभिनेत्री मानन्धरले आफ्ना श्रीमान् विनोदले आफ्नो तथा छोरी कविताको मात्र मतदाता परिचयपत्र बनाएर आफूमाथि तानाशाही लादेको आरोप लगाउँदै सामाजिक सञ्जालमा घरायसी विवादलाई छताछुल्ल पारिन् ।
करिश्माले आफ्नो स्टाटसमा लेखेकी छिन्— ‘सायद यो लेख्न हुँदैनथ्यो...तर हद भयो सहने, हरेक कुरा त परिवार, आफन्त र छोरीका लागि सहेँ, यसै पनि विनोदजीको असाध्यै राम्रो मान्छे भन्ने इमेज छ, तर आज मेरो मालिक बन्ने तानाशाहीको हदले गर्दा मेरो मनले सहन मानेन ।’ करिश्माले आफ्नो स्टाटसमा लेखेकी छिन्–‘विनोद, तिमी एउटा परिवारमा बस्छौ र परिवारका हरेक सदस्यको आ–आफ्नै अधिकार र चाहना हुन्छन् । तिम्रो एकल निर्णयले हुँदैन, सबै कुरामा तिमी नै मालिक बन, तर केही कुरा सहन सकिँदैन । तिमिले हाम्रा लागि गरेका कुरा हामीप्रतिको तिम्रो कृपा मान्नुपर्ने ?’
करिश्माले नागरिकता तथा मतदाता परिचयपत्र बनाउँदा विनोदले आफूमाथि अन्याय गरेको दावी उक्त स्टाटसमा गरेकी छिन् । करिश्माले लेखेकी छिन्–‘म काठमाडौंको नागरिकता भएकी मान्छे, उहाँसँग विवाह गरेपछि सप्तरी, राजविराजबाट मेरो नागरिकता मानन्धरको नाममा परिवर्तन गरियो । म चुप लागेँ, श्रीमान्को थर राख्नुपर्छ भनेर । यत्रो वर्ष भयो, उहाँले मेरो भोटिङ कार्ड बनाइदिनु भएन । हामी लाजिम्पाटमा बस्छौं, आफ्नो र छोरीको बसाइँसराइ गरेर उहाँले भोटिङ कार्ड लिनुभएछ तर उहाँले मेरो पनि भोटिङ कार्ड लिनुपर्छ भनेर जरुरी सम्झिनु भएन । मैले उहाँसँग सोधेँ तर वास्ता गर्नुभएन । म आफैं गएर तीन घन्टा लाइन बसी आफ्नो नाम रजिस्ट्रर गरेँ, तर मसँग बसाइँसराइको कागज थिएन । त्यसैले सप्तरीको मतदाता नामावलीमा भएको मेरो नाम काठमाडौंमा सार्न सकिएन । न म राजविराजकी हुँ, न म त्यहाँ कहिल्यै बसेकी छु, कसरी त्यहाँ गएर भोट दिने ? अरू सबै कुरामा उ मेरो मालिक होला, तर मेरो नैसर्गिक अधिकारमा पनि स्वामित्व जमाउन खोजेको मलाई सह्य भएन ।’ करिश्माको यो स्टाटस सार्वजनिक भएपछि सयौंले प्रतिक्रिया जनाउँदै घरभित्र भएको श्रीमान्–श्रीमतीको झगडालाई बाहिर ल्याएको भन्दै करिश्माप्रति नै रोष व्यक्त गरेका छन् । करिश्माले भने आइतबार मध्यरातसम्म त्यस्तो प्रतिक्रिया जनाउनेहरूलाई जवाफ फर्काएकी छिन् ।
( चिसिएको सम्बन्ध )
यो प्रकरणमा प्रतिक्रिया जनाउनेहरूमध्ये कतिपयले विनोद मानन्धरलाई समेत दोषी मानेका छन् भने धेरैले करिश्मालाई नै दोषी ठहर्‍याएका छन् । वास्तवमा करिश्मा र विनोदबीचको सम्बन्ध चिसिएको लामो समय भैसकेको उनीहरूका निकटतम मित्रहरू बताउँछन् । स्टाटसमा लेखिएको एउटा वाक्यबाट पनि उनीहरूबीचको सम्बन्ध बिग्रिएको धेरै भैसकेको अनुमान गर्न सकिन्छ । करिश्माले लेखेकी छिन्— ‘हरेक कुरा त आफन्त र छोरीका लागि सहेँ ।’ करिश्माको यो भनाइले विनोदले उनलाई अन्य कुरामा समेत अन्याय गरिरहेका छन् भन्ने संकेत गर्छ । करिश्माले आफ्नो स्टाटसमार्फत विनोदले आफूलाई परिवारको महत्वपूर्ण सदस्य नै नमानेको समेत उल्लेख गरेकी छिन् ।
(आदर्श जोडी नै तानाशाह ?)
कुनै बेला करिश्मा तथा विनोद मानन्धरको जोडीलाई नेपाली चलचित्रको मात्र होइन, नेपाली समाजकै आदर्श जोडी मानिन्थ्यो । अन्तरजातीय वैवाहिक सम्बन्धमा बाँधिएको लामो समय बितिसक्दा समेत उनीहरूको दाम्पत्य जीवनका विषयमा कुनै नकारात्मक समाचार बाहिरिएका थिएनन् । भनिन्छ, विनोदलाई करिश्मा नयाँ शक्ति पार्टीमा आबद्ध भएको समेत मन परेको थिएन । यद्यपि यो कुरा हालसम्म विनोदले बाहिर ल्याएका छैनन् । करिश्माले त विनोदलाई ‘तानाशाह’ समेत भन्न भ्याएकी छिन् । करिश्माको स्टाटस अध्ययन गर्ने हो भने विनोद र करिश्माबीच बोलचाल नै बन्द भएको हो कि भन्ने आशंकासमेत उत्पन्न हुन्छ ।
( एउटै कार्यक्रममा बस्छन् अलग )
त्यसो त काठमाडौंमा आयोजना हुने अधिकांश औपचारिक समारोहमा करिश्मा मानन्धर तथा विनोद मानन्धर प्राय: अलग–अलग कारमा पुग्ने गरेका छन् । एउटै समारोहमा दुई भिन्न समयमा प्रवेश गर्ने, दुई भिन्न स्थानमा बस्ने तथा दुई भिन्न सर्कलमा रमाउने उनीहरूको धेरै पहिलेदेखिको बानी हो ।
( करिश्मा भयंकर सुन्दरी लाग्दिनन् ? )
करिश्मा मानन्धर तथा विनोद मानन्धरको सम्बन्धका बारेमा यसअघि बेला–बेलामा समाचार प्रकाशित नभएका होइनन् । अघिल्लो वर्ष एक राष्ट्रिय दैनिकसँगको अन्तर्वार्तामा विनोद मानन्धरले आफ्नी श्रीमती करिश्मा मानन्धरका बारेमा गरेका केही टिप्पणी आश्चर्यजनक मात्र छैनन्, अविश्वसनीय पनि छन् । विनोद मानन्धरले करिश्माका बारेमा भनेका छन्– ‘करिश्मा राम्री छिन्, अरूलाई सुन्दरी पनि लाग्छिन् होला तर, आफ्नै श्रीमती भएर पनि होला, मलाई भने करिश्मा त्यति भयंकर सुन्दरी लाग्दिनन् । हुन त केटा मान्छेले श्रीमती अरूको, केटाकेटी आफ्नो राम्रो मान्छन् भन्ने उखान नै छ । ‘घरकी मुर्गी दाल बराबर’ भएर पनि होला ।’ अर्को एउटा प्रसंगमा विनोदले भनेका छन्– ‘पछिल्लो समय हामी बूढाबूढी एकसाथ रेस्टुराँ गएको घटना दुर्लभ छ । करिश्माले जाउँm भन्दिनन्, मैले पनि जाउँm भनेको छैन । घरमा पनि सँगै खाना नखाएको ६–७ वर्ष भैसक्यो । कहिले उसको काम पर्छ, खाएर हिँड्छे, कहिले म खाएर निस्कन्छु । राति पनि त्यस्तै हो ।’ विनोद मानन्धर यतिमै सीमित भएका छैनन् । उनले भनेका छन्— ‘उनले कमाएको पैसा मलाई दिन्नन् । आफूले कमाएको आफैंले खर्च गर्ने हो । पैसा भयो कि खर्च गरिहाल्ने बानी छ उनको । उनी जुत्ताको ठूलै सौखिन हुन्, पाँच–दस हजारको जुत्ता किन्छिन् । घरमा लाखौं मूल्य पर्ने सयौं जुत्ता छन् । एउटा जुत्ता दुई तीनपल्ट भन्दा बढी लगाउँदिनन् ।’ विनोदले करिश्माको व्यक्तिगत आनीबानीमा पनि टिप्पणी गरेका छन् । उनले भनेका छन्, ‘करिश्माको जिद्दीको त कुरै छाड्नुस् । उनले भनेको भएन भने सोच्नुस् खत्तम भयो । सोचेको गरेरै छाड्ने बानी छ ।’ करिश्माको पिउने बानीका बारेमा समेत विनोदले मुख खोलेका छन् । उनको भनाइ छ—‘ह्विस्की– वाइन पनि पिउँछिन् तर उनलाई मन पर्ने पेय चाहिँ बियर हो । उनी अवस्था हेरेर पिउँछिन् । कहिले ३–४ बोतल पनि पुग्छ तर, मलाई चाहिँ बियर मन पर्दैन । ३–४ बोतल वियर पेटमा कसरी अटाउन सकेको होला भन्ने लाग्छ।’
( करिश्माको प्रतिटिप्पणी ? )
जाबो एउटा भोट भन्नुभयो ? म मानिस हुँ । यो समाजका लागि केही गरेर जानु छ । परिवार चाहिन्छ, तर स्वार्थ होइन । नेपालमा महिला जतिसुकै जान्ने भए पनि स्वामित्व र अधिकार पुरुषमै हुन्छ, आर्थिक तथा कागजी अधिकारका कुरामा । यो मेरो घरको समस्या होइन, मेरो अधिकारको कुरा हो । हाँ (विनोद मानन्धर) सँग विवाह गरेर मैले पछुतो गरेको होइन । खालि उहाँको कमजोरी बताएको मात्र हो । उनी असल व्यक्ति हुन् तर लापरबाह छन् ।
मलाई राजनीति गर्नु छैन । म खालि नयाँ शक्तिको विचारको समर्थक हुँ ।म अमेरिकाजस्तो नियम भएको देश भोगेर आएकी हुँ, सिक्नु पर्दैन । यो घरको कुरा होइन, मैले विनोदजीलाई नै भनेको हुँ । शायद उहाँले हेर्नु भयो होला । सत्य बोल्नु पर्छ । म चार वर्षदेखि यही कुराका लागि लडिरहेकी थिएँ । म आफ्नो पारिवारिक विषयमा कुरा गरिरहेकी छैन, मैले त आफ्नो मतदान अधिकार गुमेको कुरा गरिरहेकी छु, त्यो पनि आफ्नै परिवारका सदस्यका कारणले । मैले नगरेको होइन, तर उनको काम नै यस्तो गैरजिम्मेवार निस्कियो । म काठमाडौंकै हुँ अनि जुन जिल्लाको भए पनि यहाँबाटै भोट हाल्न मिल्छ, खालि विनोदजीले ढिलो गरेकाले मात्र हो । मैले विनोदलाई म वयष्क छु र मेरो अधिकारका बारेमा मलाई थाहा छ भन्न खोजेकी हुँ । ठीक छ, मलाई झूटो गरिमा चाहिँदैन । यो एक वर्षदेखिको कुरा हो, आजको होइन । आज त मलाई लाग्यो कि यो कुरा विनोदजीलाई महसुस गराउनुपर्छ । यो झिनो–मसिनो कुरा होइन, मानिसको स्वतन्त्रताको कुरा हो जुन अरू कसैको हातमा हुँदैन । म आफैं गएर भरेको हुँ मतदात परिचयपत्रको फारम तर घरका मालिक त मेरा पति नै हुन् नि । उनले बसाइँसराइको कागज नदिएपछि कसरी हुन्छ ? मलाई लाग्दैन, सत्य कुरामा के–को बेइज्जति ? राजविराजबाट भोट हाल्ने हो भने त अहिले पनि मिल्छ नि । मैले उनलाई पटक–पटक अनुरोध गरेकी हुँ । मैले मलाई परेको कुरा लेखेकी हुँ । तपाईंलाई सत्य कुरा थाहा छ दिदी (अञ्जली) ।